Onye nhazi ihe omume na Korea | Onye nhazi ogbako ndị ọkachamara na Korea
1. Pụrụ iche Venue
Ike: NUMlọ 5, Nkwụ: 200 ~ 1,500, Nọdụ: 150 ~ 1,300 (Nkeji: Onye)
Okike / Ojiji / 5 nwere oghere 15
Ike: NUMlọ 8, Nkwụ: 80 ~ 1,000, Nọdụ: 60 ~ 500 (Nkeji: Onye)
Ubi / Mbibi / Western
Ike: NUMlọ 10, Nkwụ: 50 ~ 100, Nọdụ: 20 ~ 146 (Nkeji: Onye)
Omenala Korea Royal ọdịnala / Performancerụ ọrụ Korea
Ike: NUMlọ 5, Nkwụ: 60 ~ 200, Nọdụ: 40 ~ 120 (Nkeji: Onye)
Hanok / Akụkọ ihe mere eme / nlele eke
Ike: NUMlọ 2, Nọdụ: Ahụghị, Nọdụ: 60 ~ 197 (Ndiiche: Onye)
Ngosipụta / Nlere Abalị / Osimiri Han
Agwaetiti Sevit (Sevit )fọdụ)
Ike: NUMlọ 4, Nkwụ: 300 ~ 1,000, Nọdụ: 160 ~ 550 (Nkeji: Onye)
Lee Han-osimiri View / Nkewa mmiri gbasara ụwa
2. Njem Pụrụ Iche
Muta nka nke Taekwondo
Ahụmahụ nri Korea
Etourism na-enye ihe omume ndị na-akwado ọrụ pụrụ iche maka ụlọ otu, mgbakwunye ụlọ ọrụ ma ọ bụ ụgwọ ọrụ. Itinye aka na mmega ahụ dịka K-pop na-agba egwu nri Korea, yana Taekwondo nke enwere ike ịme naanị na Korea. Ihe omume a ga - eme ka ndị ọrụ pụọ n'ụlọ ọrụ ahụ wee nwee oge iji zuo ike ma mee ka echiche ọhụụ na - aga. A na-anabataghị ụlọ ọrụ ịhọrọ njegharị nke edobere ma ọ bụ rịọ maka mmemme ahaziri ahazi dabere na ebumnuche na mmasị ndị otu.
3. Njikwa akara aka
Etourism bụ ụlọ ọrụ na-ahụ maka njikwa nke na-ahụ maka njikwa ụlọ, ụgbọ njem, ebe ọgbakọ, ụlọ oriri na ọ restaurantsụ ,ụ, ihe omume a na-ekwu na nri abalị Gala. Nkọwa ejiri nlezianya na-eduga na nhazi dị mma, nke na-enye ohere ka ụlọ ọrụ ụlọ ọrụ na-elekwasị anya n'ihe ọrụ ma ọ bụ nzukọ.
Site na ụlọ nkwari akụ 5 nke oge a ruo na Omenala Korea ụdị ọdịnala, Etourism nwere ike inye ụlọ obibi dịgasị iche iche na mba niile.
Choosedị ugbo ala ịhọrọ site na 45 oche oche, 25 seater deluxe bus, 7 ~ 9seater van ka Sedan maka ndị isi ụlọ ọrụ ma ọ bụ ndị isi.
Ikem na onye njikwa oru
Etourism dị njikere mgbe nile inyere gị aka iji mee ka ọmụmụ ihe gị gaa nke ọma.
Ngwá ọrụ nka na ụzụ
Ntinye nke ulo
Nri (nri nkuru ma obu akwukwo)
Ihe onunu na egbu egbu
Arụmọrụ (K-pop, DJ, wdg)